၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်များ (အပိုင်း-၃) | Frontier Myanmar
စစ်အရာရှိဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အချမ်းသာဆုံး မိသားစုများထဲက တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွင်းက နှလုံးရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ ဦးအောင်သောင်းဟာ ၂၀၀၃ ခုနှစ်အတွင်းက စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဒီပဲယင်းမြို့အနီးမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ယာဉ်တန်းကို တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအတွက် အဓိက အရေးပါသူအဖြစ် အတိုက်အခံတွေက စွပ်စွဲပြောဆိုထားပါတယ်။ ၎င်းဟာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်က အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ နာမည်ပျက်စာရင်းထဲ ထည့်သွင်းခြင်းခံခဲ့ရပြီး “မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး ပြောင်းလဲမှုကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ထိခိုက်နေသူအဖြစ်” စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။
၁၈. ဦးရဲထွဋ်၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး
အငြိမ်းစား ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဖြစ်သူ ဦးရဲထွဋ်ဟာ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာ ယခင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည် ရာထူးက နုတ်ထွက်သွားပြီးနောက် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးသစ် ဖြစ်လာခဲ့ပြီး သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာ အထင်ရှားဆုံး ဝန်ကြီးတစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ လူမှုကွန်ရက် ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ကို အသုံးပြုလေ့ရှိတာကြောင့် ဖေ့စ်ဘွတ်ဝန်ကြီးလို့ လူသိများတဲ့ ဦးရဲထွဋ်က လာမယ့် အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ မည့်သည့်ရာထူးမှ မျှော်မှန်းထားခြင်းမရှိဘဲ မိသားစုအတွက်သာ အချိန်ပေးလိုကြောင်း ဒီဇင်ဘာလအတွင်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၁၉ . ဒေါက်တာ တင်မာအောင် – ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကိုယ်ရေးလက်ထောက်
လူသိမများပေမယ့် ဒေါက်တာတင်မာအောင်ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လက်ထောက်အဖြစ် ယုံကြည်အားကိုးခံထား ရပါတယ်။ အင်န်အယ်လ်ဒီဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူ စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ ဒီလိုဖွဲ့စည်းမှုထဲမှာ ဒေါက်တာတင်မာအောင်အနေနဲ့ ပါတီထိန်းသိမ်းသူ တံခါးမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာကလည်း အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။
၂၀. ဦးသိမ်းဝေ – စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်
သူဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အပြောင်းအလဲကာလမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာကို လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီထဲမှာ အကြီးဆုံး အိမ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း သုံးခုဖြစ်တဲ့ Star City စီမံကိန်း၊ ရန်ကုန်မြို့တွင်းက Landmark စီမံကိန်းနဲ့ နေပြည်တော်က Kris Plaza စီမံကိန်းတို့လည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
၂၁. ဦးထွန်းမြင့်နိုင် (ခေါ်) စတီဗင်လော – စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်
အမေရိကန်ရဲ့ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုကို ခံနေရပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး ခရိုနီတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးထွန်းမြင့်နိုင်ဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အကူးအပြောင်းကာလမှာ ထူးထူးခြားခြား ဒုက္ခခံခဲ့ရခြင်း မရှိပါဘူး။ Asia World ကုမ္ပဏီကို ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှာ သူရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ လော်စစ်ဟန်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ လော်စစ်ဟန်ဟာ ကိုးကန့်၊ တရုတ် မူးယစ်ကုန်ကူးရာမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အဖြစ် ပြောင်းလဲလာသူ ဖြစ်ပါတယ်။ Asia World ကုမ္ပဏီဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး ကုမ္ပဏီများထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၂၂. ဒေါက်တာ ညိုညိုသင်း – လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
ဗဟန်းမြို့နယ်က တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် နိုဝင်ဘာ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်အရွေးခံရာမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ဒေါက်တာညိုညိုသင်းဟာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအနေနဲ့ အကျင့်ပျက် ခြစားခြင်းကို တိုက်ဖျက်ဖို့ ကြိုးစားရာမှာ နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့သစ် စီမံကိန်းကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်ဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပြီး ရွှေတိဂုံ စေတီတော်နဲ့ နီးကပ်စွာ တည်ရှိတဲ့ အိမ်ရာစီမံကိန်း ငါးခုကိုလည်း အတိုက်အခံ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီစီမံကိန်းလည်း ဇူလိုင်လအတွင်းက ရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။
၂၃. ဦးမိုက်ကယ်မိုးမြင့် – ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းရှင်
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းရဲ့ လေယာဉ်မှူးဟောင်းဖြစ်သူ ဦးမိုက်ကယ်မိုးမြင့်ဟာ MPRL E&P ကုမ္ပဏီများ အုပ်စုရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဏ္ဍမှာ အကြီးဆုံး တိုင်းရင်းသားပိုင် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါတယ်။ British Virgin Islands မှာ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ သူ့ကုမ္ဗဏီဟ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကမ်းလွန် ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ စီမံကိန်း ၁၈ ခုထဲက နှစ်ခုကို တင်ဒါ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
သြဂုတ်လမှာ သူရဦးရွှေမန်းကို ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက အရေးယူလိုက်ပြီးတဲ့နောက် အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ် ဦးဌေးဦးဟာ ပါတီရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း သူဟာ နိုဝင်ဘာ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်မရရှိခဲ့ဘဲ အင်န်အယ်လ်ဒီကို အရှုံးပေးခဲ့ရပါတယ်။ သူဟာ အရံှုးကို ကျေကျေနပ်နပ် ခံယူခဲ့ပါတယ်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဟောင်းဖြစ်တဲ့ ဦးဌေးဦးအနေနဲ့ လာမယ့်အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ တနေရာက ပါဝင်ခွင့်ရနိုင်မလားဆိုတာကိုတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
၂၅. ဒေါ်ခင်ဝိုင်းကြည် – လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုပါတီ- NDF ရဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ခင်ဝိုင်းကြည်ဟာ လွှတ်တော်တွင်း အချိုးကျကိုယ်စားလှယ်များ ထားရှိသည့် ပီအာရ်စနစ်ကျင့်သုံးရန် အဆိုတင်သွင်းခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအဆိုကလည်း အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူဟာ မဘသအဖွဲနဲ့ ပူးပေါင်းကာ နေပြည်တော်မှာ အမျိုးသားစိတ် အပြင်းထန်ဆုံး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးအဖြစ် ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။